Ihe kpatara ịmụ ihe bụ ihe eji enyere ndị ahịa aka | Martech Zone
Saturday, October 17, 2015 Fraịde, Ọktọba 16, 2015 Barry Kelly
Anyị ahụla mmụba dị ịtụnanya na ire ahịa ọdịnaya n'afọ ndị na-adịbeghị anya-ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile na-abanye n'ụgbọ. N'ezie, dị ka ndị ahịa ọdịnaya Institute, 86% nke B2B ndị ahịa na 77% nke B2C ndị ahịa na-eji ahịa ọdịnaya.
Mana ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi na-ewere usoro azụmaahịa ọdịnaya ha n'ọzọ na-esote ma na-etinye ọdịnaya mmụta mmụta n'ịntanetị. N'ihi gịnị? Agụụ na-agụ ndị mmadụ maka ọdịnaya agụmakwụkwọ, na-achọsi ike ịmụtakwu ihe. Dị ka Akụkọ Amụma nke Ambient, ahịa zuru ụwa ọnụ maka mmụta ntanetị na-aga n'ihu onwe ya ga-eru $ 53 ijeri na 2018.
Ihe omumu ihe omuma nke ntaneti na aka ndi ozo di iche iche dika ihe ederede, akwukwo ederede, akwukwo ozi, ihe omuma na vidiyo, mana o na enye ndi mmadu na ndi ahia aka igwu ala ma muta karia.
Dịka ngwa ọrụ ntinye aka maka ndị na-ere ahịa, akara, ma B2B, na B2C, na-eche echiche otu mmụta mmụta ntanetị si dabara na usoro ahịa ha n'ogologo ịzụta na usoro ndụ ndị ahịa niile.
Ma ekwenyeghi? Ihe akaebe dị na ọnụ ọgụgụ. Ihe data anyị na-egosiputa usoro nhazi saịtị na-enweghị atụ maka ndị na-ahụ maka ahụmịhe mmụta mmụta gwọchara-10 ruo 90 nkeji bụ oge nkezi kwa mmụta mmụta na oge kwa oge sitere na 5 ruo 45 nkeji.
Ka anyị leba anya n’ihe na-eme ka metrik ndị a dị egwu.
Etu esi muta ndi mmadu
Mụta na-akpali ihe ọmụma, ihe ọmụma na-eme ka ndị ọrụ / ndị ahịa nwee ike. N'elu olulu ahụ, ndị ahịa na-achọ ihe zuru ezu zuru ezu mgbe ha na-eme mkpebi mkpebi; ha choro ozi ndi ozo iji kwado ihe ha mere. Ọ bụ ezie na ndị na-enyocha ndị ọzọ, ndị ọgbọ, na ezinụlọ nwere ike ịbụ ndị nnọchi anya ọhụụ mara mma, akara enweghị ike ileghara ọrụ ya iji nyere / metụta mkpebi ịzụta.
Ihe omumu ihe omuma dika ntuziaka ngwaahịa, nyocha ndi okachamara, na webinars nwere ike inyere aka megharia ihe nchọgharị n'ime onye nzuta. Ezigbo ihe atụ nke agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ m chọrọ ịkọwa bụ Blue nile. Thedị ahụ wuru otu akụkụ dum nke na-enyere aka ịkụziri ndị na-azụ ihe. Blue Nile kwetara na ịzụrụ dayamọnd nwere ike ịba ụba, yabụ na ndụmọdụ, Ajụjụ na ntuziaka ha na -emepụta ahụmịhe ịzụ ahịa ka mma yana n'ikpeazụ onye ahịa nzọpụta.
Ohere pụrụ iche maka otu na ụdị bụ ịnye ahụmịhe ndị na-enyere ndị na-azụ ahịa aka ịbanye n'ime oge tupu ịzụta site na ahụmịhe mmụta mmụta nke ọma.
Increasesmụta enwekwu nkuchi. Ọ bụ ezie na ụwa sọftụwia na-arụ ọrụ iji dozie nka dị mma nke ndị ahịa ọhụụ ịnabata usoro nghazi ngwaahịa, nchịkọta data ndị ahịa ma bido ndụmọdụ, ụwa nke anụ ahụ nọ n'ọgbọ gbara ọchịchịrị, na-adabere na akwụkwọ ntuziaka. Fọdụ ejirila vidiyo Youtube jikọta ọdịiche ahụ, mana ndị ahụ na-pịa otu onye na-asọmpi kacha nso.
Ngwaahịa dị mgbagwoju anya nwere ike ime ka ndị ahịa nwee nsogbu na nkụda mmụọ. A ọmụmụ ọhụrụ na nso nso a gosiri na a na-eji otu n'ime ngwa ise naanị otu ugboro. Ọtụtụ ngwa na-aga n'ihu na-agbahapụ n'ihi na ndị ahịa anaghị abanye nke ọma.
Nke a bụ eziokwu maka ngwaahịa ọ bụla-nke anụ ahụ ma ọ bụ nke dijitalụ. Ọ dị oke mkpa ịkwalite, ịkụziri ma jikọọ ndị ahịa ọhụrụ na akara na obodo ndị ọzọ ka ha na-ewere usoro mbụ ha. Ọ bụkwa ohere ịza ajụjụ ma nyere aka ịkpụzi echiche ha banyere akara, ngwaahịa na ọrụ ahụ n'oge na-adịghị anya.
Mụta na-eme mmekọrịta miri emi ma baa uru. Enwere njikọ siri ike n'etiti ọnụ ahịa ndụ na-aba ụba na ogo nke akara na agụmakwụkwọ ngwaahịa. Chee echiche banyere ndị ọrụ gị kachasị: ha zụrụ karịa, gbasa ozi ọma ọzọ ma zụta ngwaahịa na ọrụ metụtara ya na ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ọtụtụ ndị ọzọ.
Mgbe ị na-eke ọdịnaya maka ndị ọrụ dị ugbu a, jikọta ọnụ na ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ ịmụ. Ghọta mkpa na atụmanya nke ndị na-ege ntị ma nyefee ha ozi ahụ. Dịka ọrịre ọdịnaya niile, ịmụ ọdịnaya kwesịrị ịdị ahaziri.
Mmụta na-ewulite obodo. Otu ihe dị mkpa iji mepụta mmekọrịta na-adịgide adịgide ma na-eme mmekọrịta bụ mmepe mmekọrịta obodo na-eme ya. Obodo ndị mepere emepe na-etolite gburugburu ụdị na ngwaahịa ebe a na-ahapụ ndị ọrụ. Ọwa mgbasa ozi ọha na eze bụ nyiwe dị ike, mana na njedebe nke ụbọchị abụghị usoro mgbasa ozi nwere, ma ị nwere oke ịnweta ndị ahịa gị, data ha, yana ikike ịmetụta iguzosi ike n'ihe na ndụ oge niile.
Nkwurịta okwu na ndị ọgbọ na-eme nke ọma n’ime na n’akụkụ mmụta mmụta dijitalụ. Ejikọtara njikọ na nkwukọrịta n'etiti ndị nabatara ọhụụ, yana ndị ahịa a kụziiri akụzi dị ka ndị nkwado dị ike na ndị na-eme ihe ike.
Nnukwu ihe omuma atu banyere nka bu Usoro Mgbochi RodaleU—Ebe ndị ahịa na-esonye iji nwee ahụike. Na mgbakwunye na ndụmọdụ vidiyo na ndụmọdụ sitere na ika ahụ, ndị ahịa ahụ gbanwere onyonyo na nkuzi mụtara iji mee ka ahụmịhe ahụ baa ọgaranya.
Oge mmekọrịta ndị ọzọ na ngalaba aha bara uru ma nye ọtụtụ ohere iji soro onye ọrụ ahụ na-emekọrịta ihe ma mepụta iguzosi ike n'ihe na njikọ.
Okwu Nkeji: Mee Ugbu a
Ikekwe ị na-ahụ ohere iche echiche banyere otu mmụta ịntanetị si dabara n'usoro ire ahịa gị niile? Ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike ịnwe oke ọdịnaya nke na-eche ka a chụgharịa gị iji tinye ihe mmụta n'ịntanetị. Nke a bụ mmalite:
Onye ọkachamara a maara ama nyere onye isi okwu na mmemme ụlọ ọrụ? Nye ndị otu naanị Q & A nnọkọ ya na nzukọ ọmụmụ. Ma ọ bụ jụọ ya ka ọ kụziere usoro ndụ!
Ndị ahụ na-agwụ ike ngwaahịa akwụkwọ ntuziaka-ume ọhụrụ ha na-enyemaka nke a ngwaahịa ọkachamara na-enye ha a dijitalụ mmụta makeover na mmekọrịta, ngwaahịa demos na ndị ọzọ.
Oge ndị ahụ edere site na ogbako gị kachasị ọhụrụ? Bupute ha (na ọbụna ree ha site na usoro ndenye aha ha).
Ndị a bụ naanị ụzọ dị iche iche ụzọ mmụta nwere ike isi nọrọ na aka gị ugbu a. N'agbanyeghị ihe ị nwere, malite mkparịta ụka gị na CMO na CDO taa ma echefula na ohere mmekọrịta a. Y’oburu n’ichoo, Ulo oru Echiche nwere obi ụtọ inyere gị aka ịkọwapụta ụzọ iji wuo usoro mmụta.
Tags: njikọ akammụtammụta n'ịntanetị
Barry Kelly bụ onye isi na ngalaba-onye guzobere Ulo oru Echiche. Ọ bụ onye mmeri na-azụ ahịa na-azụ ahịa, onye na-ere ahịa na onye na-amụ ihe mmụta dijitalụ. Ọrụ ya elekwasị anya n'inyere ụdị na ụlọ ọrụ ọdịnaya aka iwepụta ike nke e-mmụta iji kwalite na ịzụlite azụmaahịa ha.